Maitiro Ekudzivirira Kutapukirwa neiyo Coronavirus
Novel Coronavirus 2019, iyo World Health Organisation yakazvitumidza zita kuti 2019-NCOV. musi waNdira 12, 2020. Coronaviruses imhuri hombe yemavhairasi inozivikanwa kukonzera dzihwa uye zvimwe zvirwere zvakakomba seMiddle East Respiratory syndrome (MERS) uye chakanyanya chirwere chekufema (SARS). Novel ...
Ndezvipi zvinhu uye kuumbwa kwevekurapwa vega gown?
Kubuda kwehosha kwakonzera kusakwana kwemushonga michina, uye vanachiremba vakashandisa polypropylene raincoats. Idzi yero yero, chena, bhuruu, uye yakasviba yebhuruu zvipfeko zvekudzivirira, magauni ekuzviparadzanisa, uye nguo dzekuvhiya dzine zviyero zvinoenderana Zvakafanana here? Pazasi ini ndinoedza kukurukura izvi m ...
Covid-19 denda: Ndeipi yepasirese coronavirus hotspots?
Coronavirus iri kuenderera mberi ichipararira pasirese, iine mamirioni makumi matatu nemasere akasimbiswa kesi munyika zana nesere uye huwandu hwevakafa hunosvika miriyoni imwe nekukurumidza. Mwedzi mitanhatu mushure mekunge World Health Organisation (WHO) yazivisa kuti denda, hutachiona huri kuwedzera munyika zhinji uye dzimwe dzaive dzakajeka ...
Coronavirus kunhuwa kurasikirwa 'kwakasiyana nechando uye dzihwa'
Kurasikirwa kweinhuhwi kunogona kuperekedza coronavirus kwakasarudzika uye kwakasiyana neakaitika kune mumwe munhu ane chirwere chakashata kana dzihwa, vanodaro vatsvagiri veEuropean vakadzidza zviitiko zvevarwere. Kana varwere veCovid-19 vachinhuhwirira kurasikirwa zvinowanzoitika nekukurumidza uye zvakanyanya. Uye ivo vanowanzo ...